‘गफाडी’ मुख्यमन्त्री : समृद्धिलाई नाघेर भने, ‘प्रदेशलाई विश्वकै नमूना बनाउँछौं !’ – Satyapati
‘गफाडी’ मुख्यमन्त्री : समृद्धिलाई नाघेर भने, ‘प्रदेशलाई विश्वकै नमूना बनाउँछौं !’
शेरबहादुर थापा । सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशलाई विश्वकै नमूना बनाउने गरी काम भइरहेको बताए । प्रदेशवासीले आधारभूत सेवासुविधा समेत नपाइरहेको अवस्थामा मन्त्रीको भाषणले सहभागीहरू छक्क परे ।
पुस १० गते जिल्ला क्रिकेट संघ रुकुमले रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेश कप टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशलाई विश्वकै नमूना बनाउने अभिव्यक्ति दिए । क्रिकेटको कार्यक्रममा अगाडि बढ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वकै नमूना प्रदेश बनाउने भनेपनि प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने भाषण गर्न मुख्यमन्त्री कहिल्यै बिर्सिदैनन् ।
मुख्यमन्त्री मात्रै होइन, कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीले समेत समृद्धिलाई हरेक भाषणमा जपिरहन्छन् । गत मंसिर १२ गते मुख्यमन्त्री शाही उपराष्ट्रपतिसँगै कर्णालीको रारा ताल र शे–फोक्सुण्डो ताल अवलोकन गर्न गए । त्यहाँ आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले अब कर्णालीलाई सबैले चिन्ने बताए । ‘सबैको ध्यान कर्णालीमा केन्द्रित हुनेछ । सबैले भ्रमण गर्नेछन् ।
कर्णालीलाई धेरैले अझै पिछडिएको, गरीब प्रदेश भनेर चिन्छन् । तर अब हामी पर्यटन विकासका माध्यमबाट कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौं,’ उनले भने । गत जेठको १४ गते मुख्यमन्त्री शाहीले उद्यमीलाई उत्साह दिने गरी भनाई राखेका थिए । उद्योग तथा उद्यमशीलता विकास र लघु उद्यम विकास मोडल सम्बन्धी वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले उद्यमीलाई ‘तपाईहरू उत्पादन गर्नुस्, तपाईका उत्पादन बजारीकरणका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्नेछ’ भने ।
नेता शाहीले नेतृत्वले बोल्दाखेरी विचार पुर्याउनुपर्ने बताए । ‘उहाँ सरकार प्रमुख हो । कहाँ के बोल्ने, कस्तो सपना बाँड्ने भन्ने कुराको ख्याल गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सरकार सपना नदेखेर हुन्छ भन्छ । सपना देख्न पाइन्छ । तर व्यावहारिक सपना देख्नुस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।’ प्रदेश सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले पनि साथ दिइरहेको उनले बताए ।
‘हामीले विकासको लागि सरकारलाई साथ दिएका हौं । हावा कु्राको लागि सरकारलाई साथ दिएका होइनौं,’ उनले भने, ‘सरकार बनेपछि कहाँ बाटो बन्यो ? कहाँ के काम भयो ? हामीलाई देखाओस् । अनि विश्वको नमूना बनाउँछु भन्दै सरकार हिँडोस् ।’ नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी प्रदेशसभा सदस्य देवी वलीले प्रदेशलाई नमूना बनाउनुपर्ने बताइन् ।
‘विश्वको भन्नुभन्दा पनि नेपालकै नमूना प्रदेश बनाउने गरी सरकार अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘जनतालाई मिठामिठा कुरा गरेर भुलाउनुभन्दा सरकारले राम्रो काम गरोस् । हामी साथ दिन तयार छौं ।’ प्रदेशसभा सदस्य वलीले भाषण गर्नुभन्दा पनि काम गर्न सकियोस् भन्नेतिर सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘कुराभन्दा काम गरेर सरकारले देखाउनुपर्छ । जनताले महसुस गर्ने गरी काम गरेर सरकारले देखाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘ठूला सपना देखाएर काम नहुने अवस्था सिर्जना नहोस् ।’